abameli Abaningi oseza umthetho lobugebengu ngokuvamile zibuze lo mbuzo: "? ayiswe - kuyini" Empeleni, lo eside ayiyona inkimbinkimbi. Ayiswe - yikhono isimo ukuze ajezise omonile, owakwazi ukubaleka kwenye indawo.
Lo mqondo kusho le ndaba yokungaziphathi isigebengu lifihle kwelinye izwe. Nokho, lokhu kungenzeka kuphakama kuphela uma kukhona isivumelwano okuhambisanayo phakathi kwalawa mazwe amabili. Kulokhu, lo muntu ingakwazi ukunikeza State lapho ayecashe noma ngabe unelungelo ukulinda isicelo ezifanele iziphathimandla.
Inqubo ngokudlulisela umthetho angaphandle ejensi kanye lobugebengu libizwa igama elithi "ayiswe". Kuyini, uyazi. Njengoba ukuba yesivumelwano, CIS amazwe kukhona neSivumelwano usizo lwezomthetho kanye nobudlelwane zomthetho civil, umndeni kanye nemacala ebugebengu. Yiqiniso, zikhona izimo le nqubo akunakwenzeka ngaphansi kwazo. Kodwa, lokhu ngeke ukubhekana kamuva.
Ayiswe kanye noMthetho International
Kufanele kuqashelwe ukuthi isivumelwano ayiswe sabantu abaye benza isenzo esingekho emthethweni kuleli zwe ikhaya nokufihla indawo yokukhosela ezweni elingumakhelwane, akukho kuyo yonke indawo. Ayiswe eMthethweni International sihlinzekela kokucubungula esimweni sokuqondisa lobugebengu ezweni lakubo, ngisho noma inkontileka ayisayindiwe. Lokho umuntu olungile ekhishwa 'isimiso reciprocity ". Kulokhu, uMbuso eyamukelayo Kumele unikeze isevisi ethile ukuze lizwe, abavumelana ukuze uthumele okonile. Okungukuthi ayiswe kulokhu akwenziwa saziso. Isimo ngokwayo enquma yini noma cha ukuze afeze ukwenza inqubo enjalo. Nokho, zikhona izimo lapho ukuze uthole umuntu owenza isenzo emthethweni, kunzima kakhulu.
Ayiswe emthethweni international nokudluliswa lowo okonile ngesisekelo isinqumo enkantolo, uma kungekho sivumelwano esikhethekile. Nokho, isinqumo esihle kunzima ukuthola.
Lapho kungenzeka ayiswe?
Ayiswe (kuyini, usuwazi) kwenziwa Ezimweni ezinjalo:
- uma isenzo ekhubazekile obenziwe ngaphakathi State edinga ayiswe;
- isephulamthetho ine ubuzwe yezwe okudinga ayiswe;
- ukoniwa kwakusobala kangangokuthi kuphambene izithakazelo State noma kuthiya nokuvikeleka kwangaphandle nangekhatsi yayo.
Uma umuntu enzile izenzo ezingekho emthethweni emazweni amaningana, ayiswe yakhe yenziwe kuphela ngemva nezingxoxo zokubonisana eside, kuye ngokuthi yikuphi ukoniwa sisibi kakhulu.
Kungaphansi kwaziphi izimo can nokudluliswa wobugebengu?
Kunemibandela ethile ayiswe kungenzeka ngaphansi kwazo. Okungukuthi, ukuze uthumele lowo okonile ngomunye uRhulumende kungenzeka kuphela uma:
- counterparty uqinisekisa ukuphepha ukuphila nempilo umuntu abuyiselwe. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi isimo uma ibhaliswe ngokomthetho isigwebo sentambo kuleli zwe.
- UMbuso uye walungiselela ubufakazi obanele wecala tilandzelwe.
- Uma kungekho sisekelo esiqinile ukuze ayiswe, umuntu akufanele futi noma ibekelwe imingcele inkululeko yakhe.
Kwezinye izimo, le nqubo asisebenzi?
Ayiswe, (kuyini, siyatshelwa) kungenziwa sinqatshelwe. Lokhu kwenziwa Ezimweni ezinjalo:
- owonile bacela ukukhoseliswa ezombusazwe futhi kubhekwa umbaleki;
- ubugebengu yisimiso ukulinganiselwa kakade aphelelwe yisikhathi;
- uma umuntu isuke yenze isenzo emthethweni, oyisakhamuzi yezwe lapho ifihlekile;
- uma ngezizathu zomthetho lokusungula zobulelesi akuyona ukwenza isikhalazo noma owenziwa ngasese ukuba indoda.
Ukuze uthumele umuntu emagunyeni sakwelinye izwe, kubalulekile ukwethula isinqumo Office Lomshushisi. Kuphela ngale ndlela can ayiswe ngamazwe.
Izici of inqubo
Okokuqala, ukuze izwe angafeza inqubo, kubalulekile ukuthi kube khona vumelwane ayiswe kwezifunda. Okulandelayo kukhona inqubo ekudluliseni abantu neziphathimandla komthetho lomunye athi:
1. Ukulethwa isicelo elinye iqembu. Igama elithi yokucabangela imayelana 40 izinsuku, kusukela esikhathini lapho Umsolwa waboshwa.
2. Okulandelayo, ayiswe izigebengu kuphela ihhovisi lomshushisi wendawo noma esinye isakhiwo sivunyiwe. Lokho zikhetha esilinganisweni ukuzibamba esikhathini esizayo.
3. Manje ohlangothini okuhambisa ummangalelwa kufanele uhlole yonke lezisekelo ezivumela ukuba sifeze inqubo. Ngokwemvelo, lapho ziyabhekelelwa futhi izimo okuvimbela ukudluliselwa kwakhe kwenye indawo kommangalelwa.
4. kuphela ngemva esandulele isinqumo lokuvuma noma wenqabe isicelo.
5. Uma ayiswe uvunyelwe, isinqumo kumele ngempela kuzolungiswa ngesinqumo somthetho ekhethekile.
6. kuphela emva kwezindaba ezinhle kusicelo alethwe ulwazi umuntu obekwe icala.
Ngokwemvelo, enalo ithuba lokuphulukiswa ngoko- isinqumo wama-ejensi akatelela ngomthetho yezwe ukuthi ufuna ukudlulisela. Le nqubo kungaba kwenziwe ezinsukwini ezingu-10. Uma isicelo ayiswe sinqatshiwe, le counterparty kungenzeka, esikhathini esingaphansi kwesonto ukufaka isikhalazo.
Izici ayiswe Russian Federation
Njengoba-Russia, lomthetho mayelana nezinqubo zokubika has izici zayo siqu. Ngokwesibonelo, izakhamuzi Russian abaye benza ubugebengu endaweni kwelinye izwe, ayikwazi ekhishwe kuye. Nokho, iziphathimandla ziye zibopheke ukuba ajezise umuntu owenza isenzo okungalungile, ngokugcwele yomthetho. Ukukhipha iziphathimandla zaseRussia can kuphela abezizwe abaphakathi okwesikhashana kufihlwe isimo.
Eminyakeni yamuva, i-Federation uye izivumelwano eziningi zamazwe ngamazwe lapho ukulungisa ubuhlobo lamazwe ku ayiswe ekuqhutshweni. Kulokhu, uMbuso angafeza lonke uhla izenzo okuphenya, uthumele hhayi kuphela lowo omonile, kodwa futhi bonke ubufakazi eziphathelene zobulelesi.
Izici ayiswe Russia
Exchange izigebengu namanye amazwe - kuhlukile endabeni. Uma kwenziwe ayiswe Russia isihlobo kwamanye amazwe, niyazi, manje kufanele uthole ukuthi inqubo yenziwa mayelana Russian Federation uqobo.
Transmission izigebengu Russian is kunalokho nzima. Ngokuyinhloko, isikhundla esinjalo nje isuke ibangelwa ezingeni eliphansi ukuzethemba ngobulungisa. Ngokuvamile ophethe umuntu yezwe, ikakhulukazi West, ubone subtext zezombusazwe. Lokho inkantolo entshonalanga ophikayo ubuqiniso amaqiniso. Ngisho noma ubufakazi ngokumelene sobala, isimo engumakhelwane bephika kahle lesi sikhalazo ukuze ayiswe, njengoba sazi izimo lapho kuyoba khona umuntu ejele.
Nokho, uma amaqiniso mabi futhi kukhona isivumelwano elihambisana ophakathi kwala mazwe womabili, kukhona elinye iqembu kumele akhiphe uphila njengombaleki. Empeleni, kuba zonke izici exchange of abantu abaye benza bobugebengu obukhulu, phakathi kwamazwe ahlukene.
Akhiphe Cadastral. Kuyini futhi kanjani it?
Amakhadi "Sawubona" wonke umuntu
Timur Gaidar: Biography. Umkhaya Timura Arkadevicha Gaydara
Kanjani ukufundisa ingane ukubamba ipensela ngendlela efanele: Amathiphu Abazali